Etu esi melite ụda Spotify na SpotiQ | Gam akporosis
Otu esi emeziwanye ihe Spotify jiri SpotiQ
Spotify bụ otu n’ime ọrụ dị mkpa mgbe a bịara n’ịkụ egwu nye ọtụtụ nde ndị ahịa na-ewe ndị ọrụ dị ka ndị ọrụ adịchaghị kwa ọnwa, kwa ọnwa na kwa afọ. Isda bụ otu n'ime ihe ndị dị mkpa, yana nnukwu nchekwa data nke ngwa ahụ nwere.
N'agbanyeghị inwe nnukwu ọdịyo, Spotify nwere ike imezi ya site na ngwa mpụga nke a maara dika SpotiQ, ihe nhazi maka ngwa gam akporo. Naanị budata, wụnye ma hazie ya iji hụ ka arụmọrụ ọdịyo si dị mma karịa ka ọ dị na mbụ.
1 Otu esi emeziwanye egwu Spotify
2 Tọọ ndị nhazi ihe na SpotiQ
Otu esi emeziwanye egwu Spotify
SpotiQ agafeela nbudata 100.000 na Storelọ Ahịa Play, ndị ọrụ gbalịrị ya ahọrọla ngwa ahụ na kpakpando ndị kachasị elu na echiche niile dị mma. Ngwa ahụ dị naanị megabytes 5 ma rụọ ọrụ na nsụgharị Android 5.0 ma ọ bụ karịa.
SpotiQ: Equalizer na nkwalite
Ngwa SpotiQ nwere nhazi ụda iseOzugbo emepere ya ma hazie ya, ị ga-ahụ mmelite dị mma na ngwaọrụ mkpanaka, na ekweisi na-adịghị adị oke mma. Kwesighi ịmetụ ihe ọ bụla n'ime aka site na ngwa SpotiQ ma ọ bụ Spotify.
Ozugbo ibudatara SpotiQ, gaa Spotify> Nhazi nhazi ma rụọ ọrụ nhọrọ "Ọnọdụ emission Device", ozugbo SpotiQ na-arụ ọrụ ga-emekọrịta na akpaghị aka. Nwere ike ịmepụta profaịlụ dị iche iche, nke ị mepụtara site na ndabara na ndị ọzọ.
Tọọ ndị nhazi ihe na SpotiQ
N'ime nhọrọ ya, anyị nwere ike iji aka anyị hazie ndị nhazi, yabụ ọ bụrụ n'ịchọrọ ị nweta ọtụtụ ihe na ya, ọ bụ ihe ọzọ nke SpotiQ. Ọ bụrụ na ịchọghị, ịnwere ike ịhapụ ya ka ọ bụrụ nke ndabara maka egwu ọ bụla, nke ga-eweta ihe kachasị mma na egwu ahụ.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Ngwa gam akporo » Otu esi emeziwanye ihe Spotify jiri SpotiQ
Eqfy bukwara ezigbo ozo. Ọ na-arụ ọrụ na ngwa dịka Deezer. Nhazi ya nwere ọtụtụ ndị agha na ya nwere ampilifaya. Ọ na-atụ aro, ọbụna na ya free version.
Litos kwa, bu ihe ozo n’ile anya nke anyi gha ekwu banyere ya n’odinihu. Daalụ maka okwu gị!.
Amazfit Pop, si otú ahụ smartwatch ọhụrụ dị ọnụ ala si Huami
Mee ka udo nke ezigbo nwamba m na-ewepụta na mmanya ya na ụwa nke nwamba